प्रहरीको ठेक्कापट्टामा प्रहरीकै सईसापको लगानी डुबेपछि…. – साँचो खबर
प्रहरीको ठेक्कापट्टामा प्रहरीकै सईसापको लगानी डुबेपछि….
मंसिर, काठमाडौं । बहालवाला प्रहरी कर्मचारी नै ठेक्कापट्ठामा संलग्न छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । किनकि धेरै प्रहरी कर्मचारीले जागीरका साथसाथै अतिरिक्त आम्दानीका हिसाबले अर्को व्यापार व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् । अधिकांश प्रहरी कर्मचारीहरुले आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी , सालासाली वा नातेदारका नाममा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका देखिन्छन् र गरिरहेका पनि छन् ।
तर यहाँ त प्रहरी मुख्यालयको महत्वपूर्ण मानिएको भण्डार शाखामा कार्यरत रहेका बहालबाला एकजना सई दर्जाका प्रहरी नै प्रहरीको ठेक्कापट्टामा सक्रिय रहेको खुलेको हो। बहालवाला प्रहरी त्यसमाथि प्रहरी मुख्यालयको पनि ठेकेदारले सामान बुझाउने भण्डार शाखामा कार्यरत सई नै प्रहरीकै सामान खरिदको ठेक्कामा संलग्न हुनु भएपछि समाचारको पात्र बनेका हुन् ।
प्रहरीको बर्दी पहिरिएर प्रहरीको ठेक्कामा संलग्न हुने सई हुन उमेश थापा । समाचार अनुसार गत आर्थिक बर्षमा नेपाल प्रहरीले बीस हजार थान झुलको टेण्डर आव्हान गर्यो । प्रहरीले टेष्ट रिपोर्ट नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागको चाहिने गरि सो टेण्डर गरेको थियो । उक्त टेण्डर युरेसिया नामक कम्पनीलाई पर्यो ।
ठेकेदार राजन कडरिया र इन्द्र ओडारीले आधा, आधा शेयर रहने गरि टेण्डर गर्ने सहमति शुरूमा भएपनि पछाडि जोडिए प्रहरी मुख्यालयको भण्डार शाखामा कार्यरत सई उमेश थापा । इन्द्र ओडारीसँग नजिकको सम्बन्ध भएका सई थापाले झुलको स्याम्पल पनि भण्डारबाट नै निकाली ओडारीलाई दिएको समेत समाचार। भण्डारमा भएको सामान नै निकालेर दिएपछि गुणस्तर पास नहुने कुरा नै भएन । बिभागबाट पास भएको रिपोर्ट आएपछि युरेसियाले टेण्डर पायो । युरेसिया नामक कम्पनी राजन कडरियाको श्रीमतीको नाममा रहेको छ ।
सई उमेश थापा, इन्द्र ओडारी र राजन कडरिया झुलको साझेदारको रूपमा ठेक्कामा सामेल भएको खुल्यो । सई थापासँग कुराकानी र आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण काम इन्द्र ओडारीमार्फत हुने गरेको समेत खुलेको छ । ठेक्का पाएपछि युरेसियाले भण्डारमा सामान बुझायो । भण्डारले उक्त झुल टेष्ट गर्नका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग पठायो । तर तोकिएको समय सिमाभित्र गुणस्तर बिभागले टेष्ट रिपोर्ट नदिएपछि प्रहरीले युरेसियाको टेण्डर रद्द गरि बैंक ग्यारेन्टी खाएर कम्पनीलाई कालोसूचीमा हाल्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो र कम्पनी अहिले कालोसूचीमा परेको छ ।
झुलको यो ठेक्कामा सई थापाले सत्र लाख रूपैयाँ साझेदारीमा लगानी गरेको अरू साझेदारले बताएका छन् । तर सामान नबुझाए पछि र कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि अहिले साझेदार बीच झगडा चर्किएको छ । सई थापाले आफ्नो कारोवार र सम्पूर्ण डिलिङ इन्द्र ओडारीसँग गरेपनि गत कार्तिक २८ गते शुक्रबारका दिन अर्को साझेदार राजन कडरियाको घरमा पुगेर थर्काउँदै लगानी गरेको रकम नपाए जे पनि गर्नसक्ने भनी धम्की दिएको कडरियाले बताएका छन् ।
आफुलाई जागिरको मतलब नभएको र आफुले जे पनि गर्नसक्ने भन्दै घरमा आई थर्काएको कडरियाले बताए । सई थापा लामो समय प्रबन्धको खुद्रामा बसेका र त्यतिबेला पनि बिवादमा आउने गर्दथे । त्यसपछि लेखापाल भएर सिन्धुपाल्चोक, हेटौंडा गण हुँदै ६ बर्षको अवधि सकिएपछि फेरि भण्डारमा ल्याइएका हुन । सधै अतिरिक्त आम्दानी हुने राम्रो ठाउँमा बसिरहन सफल यस्ता ठेकेदार सई थापालाई हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले अब के गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
सई थापा पूर्व प्रहरी निरीक्षक दिलबहादुर थापाका छोरा हुन । प्रहरीमा पहिले हवल्दार पनि लेखापाल हुन्थे । दिलबहादुर थापा , खिला केसी यस्तै भाग्यमानी हुन्, जो हवल्दार हुँदै देखि लेखापाल भएर अकल्पनीय सम्पत्ति कमाएका छन् । तिनै मध्येका दिल बहादुरका छोरा हुन सई उमेश थापा । थापा र केसीको घर पनि कोटेश्वर महादेवस्थानमा नजिक नजिक छ । सई उमेश थापा कडरिया कहाँ गएको सीसीटिभी फुटेज समेत रहेको छ। नेपालबहस बाट
Previous: नेकपामा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न को आउलान् ?
Next: डा.पाण्डे भन्छन् : अब जाडो याममा ३ महिना यी तीन वर्गका व्यक्ति घरबाहिर निस्किनु हुँदैन